Indwangu Ye-Tactile Indwangu yendwangu ye-universal universal jacquard icabanga njengomhumushi wabantu abangaboni. Le ndwangu ingafundwa ngabantu abanamehlo amahle futhi ihloselwe bona ukusiza abantu abangaboni abaqala ukungaboni noma ukuba nezinkinga zokubona; ukuze ufunde uhlelo lwe-braille ngendwangu enobungane nejwayelekile: indwangu. Inezinhlamvu zamagama, izinombolo nezimpawu zezimpawu. Ayikho imibala engeziwe. Kungumkhiqizo esikalini sempunga njengomgomo wokuthola ukukhanya okungatheni. Kuyiprojekthi enencazelo yomphakathi futhi idlulela ngale kwendwangu yokuthengisa.
Isongo Kunezinhlobo eziningi ezahlukahlukene namasongo nama-bangles: abaklami, begolide, ipulasitiki, ashibhile futhi ayabiza… kodwa muhle njengoba enjalo, onke ahlala elula futhi angamasongo kuphela. UFred ungokunye okwengeziwe. Lama-cuffs ngokulula kwawo avuselela ubuhle obukhulu bezikhathi zakudala, nokho abesimanje. Zingagqokwa ngezandla ezingenalutho nakotshani noma ngesikibha esimnyama, futhi ziyohlala zengeza ukuthintana kweklasi kulowo ogqokile. Lamasongo ahlukile ngoba eza njengendoda. Kukhanya kakhulu okwenza ukuthi ukugqoka kube kuhle. Ngokugqoka zona, umuntu uzobuye aqaphele!
Umgexo Kanye Ne-Brooch
Umgexo Kanye Ne-Brooch Lo mklamo uphefumulelwe ifilosofi yeNeoplatonic ye-macrocosm ne-microcosm, ubona amaphethini afanayo avela kuwo wonke amazinga e-cosmos. Ibuye icubungule isilinganiso segolide nokulandelana kwe-fibonacci, umgexo uveza ukwakheka kwezibalo okulingisa amaphethini we-phyllotaxis abonwa emvelweni, njengoba kubonakala elangeni, elangeni, nakwezinye izitshalo ezahlukahlukene. I-torus yegolide imele i-Universal, embozwe ngendwangu yesikhathi sesikhathi. "I am Hydrogen" ngasikhathi sinye imelela imodeli ye- "The Universal Constant of Design" kanye nemodeli ye-Universal uqobo.
Ubucwebe Be-Upcycled Ubucwebecwebe obuhle, obucacile, obuphakanyisiwe, benziwe ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa imfucuza evela ekukhiqizweni kukaClaire de Lune Chandelier. Lomugqa usuqhamuke waba linani elikhulu lamaqoqo - zonke izindaba ezixoxayo, zonke zimele ukubonwa komuntu siqu kumafilosofi omqambi. Ukusobala kuyingxenye ebalulekile yefilosofi yabaklami, futhi lokho kuboniswa ukukhethwa kwe-acrylic esetshenzisiwe. Ngaphandle kwesibuko se-acrylic esisetshenzisiwe, sona uqobo esikhanyisa ukukhanya, okubonakalayo kuhlala kubonakala sobala, umbala noma kucace. Ukufakwa kwe-CD kuqinisa imiqondo yokuphindaphinda.
Indwangu Ye-Tactile Izibuko Iwashi Isongo Umgexo Kanye Ne-Brooch Ubucwebe Be-Upcycled